सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा २० प्रतिशत छुट दिन थालिएको छ ।
बिहीबार सरकारी निकायका दुई व्यापारिक संस्थानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको खाद्यान्न लगायत तोकिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा राहत छुट दिन थालिएको संस्थानहरूले जनाएका छन् ।
खाद्य तथा व्यापार कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने चामल र कर्णालीको सिमीमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री वितरण हुने पिठो, चिनी, नून, भटमासको तेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा मासुको मूल्य तोकियो, कुन मासुको मूल्य कति ?
कृषि सहकारी संघ सुनसरीको नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा भोलाकाजी बस्नेत
नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउने यहाँका शासकहरू को–को हुन् ? हेर्नुहोस् भिडियो
अब ११२० मा ग्यास र ६३ रुपैयाँ किलो चिनी पाइने समय बदलियाे, कुन समयमा जाने? (हेर्नुहाेस् तालिका)
कहाँ–कहाँ पाइन्छ ११ सय २० रुपैयाँमै ग्याँस, ६३ रुपैयाँमा चिनी ? दाल, नून र तेलमा भारी छुट
भोलिबाट ग्यास ११ सय २० रुपैयाँमा र चिनी ६३ रुपैयाँमा पाइने